Waa maxay humus: sifooyinka, noocyada iyo faa'iidooyinka | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Marar badan markaan ka hadlayno bacriminta ciidda, ha ahaato kaymo ama geedo, waxaan ka hadalnaa humus. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga waa maxay humus sidoo kale muhiimada ay u leedahay ciidda iyo dhirta. Humus wax kale ma aha ee waa bacrimin dabiici ah oo si dabiici ah ugu samaysan nooc kasta oo ciid ah oo ku jira xaaladdeedii asalka ahayd. Waxaa laga helaa xaddi aad u yar laakiin aad bay u nafaqo badan tahay.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa waxa humus yahay, astaamaha lagu garto iyo sida ay muhiimka ugu tahay dhirta iyo ciidda.
1 Waa maxay humus
2 Faa'iidooyinka humus ee dhulka
4 Faa'iidooyinka ka dhasha dixiri
5 Sida loo sameeyo shubanka gooryaanka guriga lagu sameeyo
Humus waa bacrimin dabiici ah oo si dabiici ah ugu dhacda nooc kasta oo carro ah xaaladdeeda dabiiciga ah. Aad bay u yar tahay tiro ahaan waxayna hodan ku tahay nafaqooyinka. Tusaale ahaan, kaynta, waxyaabaha humus ee dhulka ku jira waa 5%, halka humus ee xeebta ku yaal ay tahay 1%oo keliya.
Waxay ka duwan tahay compost iyo compost organic sababta oo ah waxay ku jirtaa geedi socod kala daadasho oo aad u horumarsan oo hoos imanaya ficilka fangaska iyo bakteeriyada: waxay leedahay midab madow sababta oo ah maadada kaarboon sare leh. Marka humus uu xumaado, wuxuu siiyaa nitrogen, fosfooraska, potassium iyo magnesium ciidda iyo dhirta. Waa habka ugu nafaqada badan ee nafaqada ee adduunka.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee humus loogu dabaqi karo ciidda waa dirxiga dhulka, kaas oo aad ka soo ururin karto beertaada. Kuwani iyo xaarka bakteeriyadu waxay soo saaraan geedi socod ka mid ah kala daadinta dabiiciga ah waxayna dardar geliyaan samayska humus dhirta.
Faa'iidooyinka humus ee dhulka
Aan aragno waa maxay faa'iidooyinka uu humus leeyahay marka uu dhulka joogo:
Wuxuu caawiyaa in biyuhu sii haystaan ​​oo hagaajiyaan. Way ku habboon tahay carrado badan inay awood u yeeshaan inay sii haystaan ​​biyaha haddii aad rabto inaad yeelato dhir la beero. Ciidda leh tiro aad u wanaagsan ayaa kaa caawin karta in si fiican loo shaandheeyo biyaha roobka si aysan u ururin oo ugu dambayntii u soo rogmato. Sidaa darteed, xagga beeraha iyo beerista waxaa xiiso leh in carradu hodan ku tahay humus.
Caadi ahaan waxay siisaa joogtaynta carrada iyadoo ku xiran nooca. Tusaale ahaan, carrada bacaadka ah waxay u adeegtaa isku -dhafka dhulka. Dhinaca kale, carrada dhoobada badan waxay leedahay saamayn kala firidhsan.
Waad ku mahadsan tahay jiritaanka dhismahan, dhir badan ayaa u sahli karta in lagu daro nafaqooyinka xididada.
Waxay hagaajin kartaa nafaqada dhirta waxayna ka dhigi kartaa beer si sahal ah u barwaaqowda.
Waxay dhulka ka dhigtaa mid bacrin ah sidaa darteedna, wuxuu ku hodansan yahay dhirta.
Haddii aad u isticmaasho bacriminta macdanta beerta guud iyo beeraha labadaba, jiritaanka humus ee dhulka ayaa caawisa is -dhexgalka bacrimiyahan.
Gooryaanka dhulku waa qayb aad muhiim ugu ah geedi socodka bacriminta ciidda. Dad yar baa garanaya faa'iidooyinka kuwan maxaa yeelay ma liqaan oo keliya maaddada organic ee la helay, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin shaqooyin kale oo badan. Waxay ku soo celiyaan walaxda dabiiciga ah qaab gabi ahaanba burburay waxayna gacan ka geystaan ​​in la milo macdanaha qaarkood oo loo rogo carro dabiici ah oo hodan ku ah oo dhirtu nuugi karto. Maxaa ka sii badan, waxay isku daraan walxaha dhirta qaarkood walxo kale oo ku yaal meelaha qoto dheer ee ciidda hoose, kaas oo doorbida dheelitirka u dhexeeya dhoobada iyo biyaha.
Natiijada geeddi -socodkani waa ciid leh qaab -dhismeed aad u weyn oo isbuunyo badan, kaas oo doorbida aeration iyo haynta biyaha. Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee dirxiga dhulka iyo sababta ugu weyn ee jiritaanka nafaqo badan oo humus ah waa xaarkeeda, maxaa yeelay iyaga ayaa uga mahadceliyay humus -ka oo ka kooban nitrogen, fosfooraska, potassium, magnesium iyo kalsiyum ka badan dhulka.
Faa'iidooyinka ka dhasha dixiri
Humus dhulka ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah substrate -ka ugu wanaagsan ee lagu tilmaamay dalagyada khudradda, dhirta udugga leh iyo dalagyada miraha. Aan aragno maxay yihiin faa'iidooyinka laga heli karo isticmaalka dirxiga gooryaanka:
Wuxuu sahlaa horumarinta dhirta iyo nuugista nafaqooyinka guud sida potassium, magnesium, fosfooraska, kalsiyum iyo kuwo kale, sababtuna waa culeyska microbial -ka ee sarreeya.
Waxaa si weyn loogu talinayaa dhirtaas u baahan beddelid tan iyo markii ay ka hortagto cudurrada oo ka fogaato dhaawacyada. Waxa kale oo ay ka caawisaa fududeynta xididka. Dhirtaas oo u baahan biyo yar, waxay ka caawisaa ka -hortagga fuuq -baxa.
Humusku wuxuu siiyaa dhirta xoog ay ugu mahadcelinayaan xaqiiqda ah inay ka caawiso koritaanka waxayna ka dhigtaa in dhirtu ay dhali karto midho waaweyn oo midab badan leh.
Wuxuu ka ilaaliyaa cudur -sidaha
Waxay kor u qaadaa hawsha bayoolojiyeed ee waxtar u leh ciidda.
Waa bacrimin ku habboon beerashada dabiiciga ah maadaama ay si buuxda u soo saareen qaybo dabiici ah oo aan wasakhayn ciidda. A
Waxaa loo isticmaali karaa labadaba sariirta, dhulka hoostiisa.
Wuxuu gacan ka geystaa nidaaminta pH ciidda.
Ma soo saarto sumoobo, taas lidkeeda.
Sida loo sameeyo shubanka gooryaanka guriga lagu sameeyo
Habka loo rogo maadada dabiiciga ah oo loo rogo bacriminta dabiiciga ah waxaa la yiraahdaa compost dixir waxayna soo saartaa compost dixiriga, oo sidoo kale loo yaqaan compost dixiriga. Nidaamkan waxaa lagu fuliyaa mashiinka qashin -qubka dhulka oo baakooyin kala duwan oo midkood korka la dul saaray oo leh godad ay dirxigu maraan marka la dheefsanayo dhammaan cuntada aan ku kaydsanno. Haddii aad danaynaysid inaad guriga ku samaysato compost -ka dhulka, waxaad samayn kartaa digada dhulkaaga goor kasta, halkan waxaan ku baraynaa wax walba oo ku saabsan compost earthworm.
Ku dhaq weel oo dhawr god ku dabool daboolka si dirxi u helo oksijiin ku filan.
Wargeysyada jarjar oo ku rid weel dusha weelka dushiisa.. Warqadani waxay u oggolaan doontaa in weelka si fiican hawo u yeesho.
Waa inaad gelisaa lakab qaro weyn oo carro dabacsan xataa haddii qoyaan ka hadho. Lakabkan waa in lagu dhejiyaa wargeyskii hore loogu riday weelka.
Codso cuntada dabiiciga ah ee hadhay sida miro la jarjaray iyo hadhaaga qudaarta.
Gooryaanka dhex dhig weelka si ay u sameeyaan hummus.
Waxaa muhiim ah in la hubiyo in weelka lagu dhajiyo meel uusan ka heli doonin hawo ama isbeddel xad -dhaaf ah oo heerkulka ah.
Waxaa muhiim ah in goor walba la quudiyo gooryaanka qashin dabiici ah oo badan. Muddo 15 maalmood gudahood ah waxaad diyaarin kartaa xaruntaadii ugu horreysay oo aad dhigto dhulkaaga.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto waxa humus yahay iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Waa maxay humus